Iko hakuna hutachiona hunogona neSpotify, 130M yekubhadhara vashandisi | IPhone nhau
Spotify ndiye mutungamiri mukumhanyisa mimhanzi, sezvazviri. Kune dzimwe nzira dzinonakidza senge Apple Music uye akasiyana ayo kunyange Amazon anopa vatengi vayo. Nekudaro, hapana chinopa senge dzimwe nzira uye kuenderana seSpotify, uye kune gumbo rayo rinogadzika, muSpotify Unganidzo uye mune iyo multiplatform system. Pamwe ndosaka pasina hutachiona hwakakwanisa kuita neSpotify iyo inoramba ichikura, kambani ichangosvika mamirioni zana nevashandisi vanobhadhara.Vachaita kuti iite purofiti kamwe chete uye zvachose? Nekuti zvinoshamisa kuti, zvisinei neizvi, iyo femu haigone kunyatso tarisa mhedzisiro.
Uku kukura kweSpotify kuri 31% kana tikachienzanisa negore rapfuura, nokudaro purofiti inokwira 22%, zvese zvinowirirana nezvitarisiro izvo vaongorori vanga vatoisa pane yakakurumbira sevhisi yekushambadzira mimhanzi. Izvi zvinopfuura zvakapetwa zvakapetwa zvakapetwa zvakawanda seApple Music, iyo parizvino ine mamirioni makumi matanhatu Izvo zvisiri pachena ndezvekuti hutachiona hunokanganisa sei ramangwana reSpotify, uchifunga kuti chimwe chehunhu hunhu hunofarira kubhadharwa kweichi sevhisi kugona kuteerera mumhanzi kunze kwenyika. Nekudaro, ndinoona zvichinetsa kutenda kuti mwedzi wakakiiwa wakaringana kudzima kunyoreswa, kunyanya sezvo paine mamwe akawanda akawedzerwa maitiro.
Ngazvive sezvazvingaite, ndinonzwisisa kuti avo vakabvisa kunyorera kwavo nezvikonzero izvi vachadzoka kana mikova yemugwagwa "yavhurwa". Iva sezvazvingaita, Spotify inoramba ichikura munguva iyo mimhanzi yedhijitari inoita kuti pfungwa dziwedzere, kunyanya nekuti dzimwe nzira dzakadai seYouTube dzinopa huwandu hwakawanda hweshambadziro iyo inotanga kuita kuti mashandisiro echishandiso asashiurike kuteerera mimhanzi kunyangwe kumba. Wakaregera kunyorera kwako kune chero sevhisi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Hapana hutachiona hunogona neSpotify, 130M yakabhadharwa vashandisi